प्रधानमन्त्री – बाइरोडको बाटोमा
Posted on February 17, 2019 May 10, 2020 Commentary
by गुणराज लुइँटेलLeaveacomment on सुन्ने कि शून्य ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि मुलुकका गन्यमान्य व्यक्तिहरूकहाँ घुसकाण्डको एउटा भिडियो चार महिनाअघि पुगे पनि कार्यान्वयनको साइत जुर्न सकेन। खर्दार–सुब्बाहरू थोकको भाउमा हरेक दिन केही हजार…
Posted on October 18, 2015 Nagarik daily
त्यो कुन बाध्यता हो ?
by गुणराज लुइँटेलLeaveacomment on त्यो कुन बाध्यता हो ?
संविधान जारी हुनभन्दा पाँच दिनअघि भदौ २८ गते साँझ तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला निवास बालुवाटारमा आमन्त्रित सम्पादकहरूसँग भन्दै थिए– ‘त्यसपछि म पनि तपाईंहरूसँगै बाहिर आउँछु…